Hankarary anao ve ny tsingerina iray amin'ny steroid - BikeHike
Azo ampiasaina tsara ve ny steroïde?
Hafiriana no sitrana amin'ny tsingerin'ny steroid?
Afaka mijanona amin'ny steroids mandrakizay ve ianao?
Tsara toy ny steroids ve ny creatine?
Mampihena ny testosterone ve ny masturbating?
Hampitombo ny haben'ny testicle ve ny hCG?
Hiverina ve ny testosterone?
Inona no zavatra ara-dalàna akaiky indrindra amin'ny steroids?
Ahoana ny fomba hitondranao ny tsingerinao steroid voalohany?
Mahatonga anao haingana kokoa ve ny steroids?
Hafiriana no azonao ampiasana steroïde soa aman-tsara?
Ohatrinona ny steroid azo antoka?
Nahoana no ratsy aminao ny creatine?
Azo antoka ve ny creatine ho an'ny ankizy 16 taona?
Natty ve ianao amin'ny creatine?
Misy fatra azo antoka ho an'ny steroid anabolika ve? Tsy misy fatra 'azo antoka' amin'ny steroid anabolika. Raha manohy mampiasa steroïde ianao, na dia eo aza ny fampitandremana ara-pahasalamana sy ny torohevitry ny dokotera, na izany aza, tazony ho faran'izay kely indrindra ny fatra ary alao sasatra amin'ny fampiasana ny steroids.
Ny fialana amin'ny steroids anabolika Mety haharitra hatramin'ny 4 volana ny famerenana amin'ny laoniny ny haavon'ny testosterone voajanahary rehefa avy amin'ny steroids anabolika mandritra ny fotoana maharitra. Ny soritr'aretina miala amin'ny steroïde dia mety ahitana: havizanana.
TSY tokony hijanona amin'ny tenanao manokana ianao na dia mihatsara aza. Raha mampiasa steroids nandritra ny herinandro vitsivitsy mahery ianao (na herinandro raha misy prednisone 40 mg isan'andro na mihoatra) dia mila mampihena tsikelikely ny fatra alohan'ny hijanonana tanteraka.
Ny steroïde créatine sy anabolika dia zavatra mitovy Diso! Ny Creatine dia tsy misy ifandraisany amin'ny steroids anabolika, izay mitovy na maka tahaka ny testosterone mba hampiroboroboana ny fitomboan'ny hozatra sy hanatsara ny fahaiza-manao ara-batana. Ny creatine dia manome hery fanampiny ho an'ny hozatrao, na manampy azy ireo hamokatra izany.
Betsaka ny olona mino fa misy fiatraikany amin'ny tahan'ny testosterone an'ny lehilahy ny filokana, saingy tsy voatery ho marina izany. Ny fientanentanana dia toa tsy misy vokany maharitra amin'ny haavon'ny testosterone.
Notaterin'izy ireo fa ny fitsaboana hCG dia nampitombo ny habetsahan'ny testicular avy amin'ny 5.5 (pretreatment) ho 10.8 mL (ambony indrindra) nandritra ny fitsaboana ary ny lehilahy rehetra dia nahatratra ny haavon'ny testosterone serum taorian'ny fitsaboana hCG. Nandritra ny fitsaboana hCG, 14 amin'ireo lehilahy 22 no nahitana tsirinaina tsara tao amin'ny tsirinainy.
Ny fitsaboana ho an'ny testosterone ambany dia dingana mitohy ary matetika dia mitohy maharitra. Toy ny amin'ny aretina mitaiza maro hafa, raha ajanonao ny fitsaboana, dia miverina ny olana - ny haavon'ny testosterone anao dia hidina any amin'ny ambaratonga ambany.
Fanampin'ny Steroid Legal Top: Ny laharana #1 D-Bal Max: Alternative amin'ny Dianabol sy Alternative Steroid tsara indrindra amin'ny ankapobeny. #2 Testo-Max: Alternative to Sustanon. #3 HyperGH 14X: Alternative amin'ny tsindrona HGH. #4 Clenbutrol: Alternative to Clenbuterol. #5 Winsol: Alternative ho an'ny Winstrol.
Amin'ny fiandohan'ny tsingerina, manomboka amin'ny fatra kely amin'ny fanafody atambatra ilay olona ary avy eo dia mampitombo tsikelikely ny fatrany. Amin'ny tapany faharoa amin'ny tsingerina dia mihena tsikelikely ho aotra ny fatra. Izany indraindray dia arahin'ny tsingerina faharoa izay manohy miofana ilay olona nefa tsy misy zava-mahadomelina.
Ny fampiasana steroïde anabolika koa dia mety hanakana ny fitomboan'ny tanora. Mety hiteraka fahanterana aloha loatra ny taolana ny steroïde.
Ny fampiasana steroid mandritra ny tapa-bolana mahery dia mety hampihena ny fahafahan'ny vatanao mamaly ny adin-tsaina ara-batana. Mety ilaina ny fatra steroïde ambony kokoa amin'ny fotoanan'ny adin-tsaina lehibe, toy ny fandidiana na fandidiana nify be dia be na aretina mafy. Mety ilaina izany mandritra ny herintaona aorian'ny nitsaharanao ny steroïde.
Latsaky ny 7.5 mg isan'andro dia heverina ho fatra ambany; hatramin'ny 40 mg isan'andro dia fatra antonony; ary mihoatra ny 40-mg isan'andro dia fatra ambony. Indraindray, ny fatra be dia be amin'ny steroïde dia azo omena mandritra ny fotoana fohy.
Miankina amin'ny anontanianao, ny voka-dratsin'ny creatine dia mety ahitana: Fahasimban'ny voa. Fahasimban'ny atiny. Vato voa.
Samy manaiky ny American Academy of Pediatrics sy ny American College of Sports Medicine fa ny zatovo dia tsy tokony hampiasa fanampin-tsakafo manatsara ny fahombiazany, anisan'izany ny creatine. Miresaha amin'ny atleta tanora anao momba izany.
Tsy voajanahary/natty ianao raha maka Vovoka Proteinina, Creatine, Pre-Workout, SARMS, ROIDS, sns.
Mety handratra anao ve ny tsingerin'ny steroid iray
Valiny haingana: Hanimba anao ve ny tsingerin'ny Testosterone iray
Fanontaniana: Ahoana ny fomba fanaovana tsingerin'ny steroid
Mety hisy fiantraikany amin'ny tsingerin'ny fadimbolana ve ny Steroid
Ahoana ny fampandehanana ny steroïde soa aman-tsara
Hafiriana ny tsingerin'ny Testosterone
Valiny haingana: Ahoana ny fomba hanodinana ny Testosterone
Hafiriana ny tsingerin'ny steroid
Fanontaniana: Ahoana ny fomba fampandehanana ny Testosterone Boosters